वृद्धाश्रममा आश्रित वृद्धवृद्धाको गुनासो कसले सुन्ने ! (भिडियो) | ImageKhabar <!-instant articles-->
वृद्धाश्रममा आश्रित वृद्धवृद्धाको गुनासो कसले सुन्ने ! (भिडियो)
बिहीबार, २६ बैशाख, २०७६
काठमाडौं, वैशाख २६ । जीवनको उत्तरार्द्धमा मानिसमा धेरै ठूलो आशा र आकांक्षा हुँदैन । त्यसमाथि घरपरिवार त्यागेर वृद्धाश्रमको शरणमा पुगेकाहरुको त झन् दुई छाक खानुबाहेक खासै अन्य आकांक्षा हुँदैन ।
तर, वृद्धाश्रममै पुगेर बसे पनि आफूले मन लागेको खान नपाउँदा भने उनीहरुको चित्त दुख्ने गरेको छ । काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको वृद्धाश्रममा बस्नेहरुको यस्तै गुनासो छ ।
अनेकौं पीडा र बेदना भोग्दै परिवारबाट अलग भएर काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको वृद्धाश्रममा बस्न पुगेकाहरुले आफूले मनले मागेको खान नपाउँदा चित्त दुख्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । वृद्धाश्रमले नयाँ कार्यविधि बनाएर वृद्धावृद्धालाई माछामासु खानबाट बञ्चित गरेपछि उनीहरुको चित्त दुखेको हो ।
१९३८ सालमा पञ्चदेवलको रुपमा निर्मित यो भवन २०३४ सालदेखि बृद्धाश्रमको नाममा सञ्चालनमा आएको हो । हाल यहाँ १६५ जना ज्येष्ठ नागरिक छन् । आफ्ना सन्तानबाट अपहेलित हुँदै वृद्धाश्रममा पुगेका यिनीहरुको दिनचर्या दशकौंदेखि एउटै छ– वृद्धाश्रमले दिएको खाना खाने र आराम गर्ने ।
तर मनले मागेको खान नपाउँदा भने उनीहरुको चित्त दुख्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भने परिवारबाट बिछोडिएको पीडा भुल्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको भोटमाया तामाङ बताउँछिन् ।
वृद्धाश्रमले २०७२ सालसम्म माछामासुकोसमेत व्यवस्था गर्ने गरेको थियो । तर, त्यसपछि कार्यविधि परिवर्तन गरेर वृद्धाश्रमको भान्साबाट माछामासु हटाइएको थियो । माछामासु खान खोज्नेहरुलाई त्यसबाट बञ्चित गर्नु उचित नहुने वृद्धाश्रममा बसेकाहरुको भनाइ छ ।
भिडियोमा हेर्नुहोस् ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो